देव बैंकको १८ करोड हिनामिना... :: नारायण खड्का :: Setopati
देव बैंकको १८ करोड हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान पूरा बैंकका सिइओ, सञ्चालक समिति समेतले मिलेमतो गरेको आशंका
नारायण खड्का दाङ,कात्तिक ३
दाङस्थित देव बैंकमा भएको झन्डै १८ करोड रूपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दाङले आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरेको छ ।
भदौ ३ गते बैंकका म्यानेजर समिर बुढाथोकी पक्राउ गरेको थियो । दाङ प्रहरीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तरगत ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान पूरा गरेको हो।
प्रहरीले केही दिन पहिले अनुसन्धानको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी जकन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
‘हामीले अनुसन्धान पूरा गरेका छौं, दोषीहरूलाई फाइन्डआउट गरेका छौं। अब बाँकी फाइल अदालत पुर्‍याउने काम सरकारी वकिलको हो,’ एसपी भट्टराईले भने ।
एपपी भट्टराईका अनुसार अनुसन्धानमा बैंकका सिइओ, सञ्चालक समिति समेत गरि झन्डै ५५ देखि ६० जना दोषी देखिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारी वकिलले आइतवार उक्त फाइल उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य इजलासमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १० नारायणपुर स्थित तत्कालिन बैष्टर्न बैंक तथा हालको देव विकास बैंकबाट १७ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैंया हिनामिना गरेको उजुरी पछि प्रहरीले बैंकका म्यानेजरलाई लमहीबाट पक्राउ गरेको थियो।
घोराही १० नारायणपुर निवासी म्यानेजर बुढाथोकीको बयानका आधारमा प्रहरीले यो अवधिमा थप १४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेका मध्य तीन जना तारेखमा छुटेपनि अन्य १४ जनालाई भने हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको हो।
घोराही उपमहानगर १० स्थित नारायपुर बजारमा रहेको बैंकको शाखाबाट कर्जा स्वीकृती नगराई गलत उदेश्यले ऋण प्रवाह गरेको आरोप म्यानेजर बुढाथोकीमाथि छ। वेस्टर्न डेभेलपमेण्ट बैंक गएको असारमा मात्रै देव विकास बैंकसँग गाभिएको थियो। बुढाथोकी २०६७ सालदेखि वेष्टर्न डेभेलपमेण्ट बैकमा म्यानेजरका रूपमा कार्यरत थिए।
म्यानेजर बुढाथोकीले ३५ जना नक्कली ऋणी खडा गरेर व्यक्तिगत लाभका लागि गैर कानुनी काम गरेको तथा बैंकको १८ करोड रकम घोटाला गरेको अभियोग छ।
ब्रान्च म्यानेजरले बढीमा २ लाख भन्दा बढीको लोन दिन नपाउने भएपनि त्यस विपरित मिलेमतोमा नक्कली ऋणि खडा गरि बैंकको ठूलो धनराशी घोटाला गरेको प्रहरीले यसअघि नै बताइ सकेको छ।
घटना बाहिरिएपछि त्यति धेरै रकम हिनामिना प्रकरणमा मिलेमतो नभएर म्यानेजर एक्लैले मात्रै केही गर्न नसक्ने हुँदा बैंकका सिईओ, अन्य कर्मचारी र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको समेत मिलेमतो रहेको आशंका प्रहरीले गरेको थियो।
त्यति ठूलो कारोवारो गर्दा होस वा लोन दिन लाग्दा बैंकका सिइओ, लोन अधिकृत, बैंक सञ्चालकको लोन समितिले स्विकृती गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नगरी लोन दिन मिल्दैन । तर देव बैंकमा त्यो सबै प्रक्रिया विपरित काल्पनिक र नक्कली ऋणी खडागरी रकम अपचलन गरिएको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् ।
सिइओ पनि फरार
करिब १८ करोड हिनामिना गरेको घटना बाहिरएदेखि नै बैंकका सिईओ खिमबहादुर डिसी फरार छन् । डिसी विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी राखेको छ।
दशैंमा सिईओ डिसीलाई पक्राउ गर्न घरमै प्रहरी पुगेको भएपनि उनी फेला परेनन्। जिल्ला प्रहरी दाङले उनलाई फरार अभियूक्तको सूचिमा राखेको प्रहरी प्रवक्ता विनोद विक्रम शाहले जानकारी दिए ।
‘सिइओ लगायत दोषी देखिन आएका अरु सबै फरार छन् । उनीहरुको खोजी तीव्र पारिएको छ,’ डिएसपी शाहले भने ।
त्यसैगरी बैंकको घोटाला प्रकरण सार्वजनिक भए लगतै सिइओ डिसी लगायका कतिपय ऋणहरु समेत फरार छन् ।
‘आर्थिक लालचका कारण कतिपय रकम जम्मा गर्नेहरु पनि अप्ठेरोमा परेको हुनसक्छन् । उनीहरुको दोष कति छ ? त्यो प्रहरीले भनेर मात्रै हुँदैन अन्तिम छिनोफानो अदालतले गर्ने छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
बैंकका म्यानेजर बुढाथोकीले मिटर ब्याजमा रकम फिर्ता गर्ने भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरु सँग आवश्यक प्रक्रिया नै पुरा नगरी रकम निकासा गरेको जस्तो देखिन आएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
बैंकक म्यानेजर र सिइओ समेतले सर्वसाधारणबाट रकम लिदा कुनै भरपाई नगराउने तर त्यसको व्याज दिदा भने उनीहरुको खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरेको हुँदा म्यानेजरलाई विश्वास गरेर लगानी गर्नेहरु समेत फसेको देखिएको छ।
‘कुनैदिन दाङ प्रदेश राजधानी हुन्छ भन्ने हल्लाले गर्दा उनीहरुले धेरैसँग रकम माग्दै मिटर व्याज दिने सर्तमा ल्याएर व्यक्तिगत लाभका लागि जग्गामा लगानी गरेको पनि हुन सक्छन्,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ‘तर, दाङ राजधानी भएन र जग्गा नबिकेपछि उनीहरु अप्ठेरोमा परेको हुनुपर्छ।’
राष्ट्र बैँक,सिआईबी र जिप्रका दाङले १८ करोड घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा सिईओ, बैँक सञ्चालकको खाता नै रोक्का गरिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २, २०७६, २३:१४:००